Efa taona maromaro anefa izay no naneho ny fahavononany hitondra ny anjara birikiny amin’ ny fanarenana ity firenena ity i Edgard Razafindravahy.
«Na ny tanànan’Antana- narivo renivohitra nan- kinina taminy aza dia efa nahitàna taratra ny finiavany hanova fomba fiasa vaovao. Misy amin’ireo tranga ankehitriny anefa no anakianan’ny olona sasany azy, indrindra ireo mpifanandrina politika sasany, saingy nisy fetra tsy azo nanoharana tsy niankina tamin’ny Pds tamin’ny fanatanterahana izany », hoy ny mpiara-miasa iray akaiky an-dRazafindravahy Edgard.
Toa mifanindran-dalana tamin’ny fahombiazany teo amin’ny tontolon’ny fandraharahana, ny dian’ itsy farany eo amin’ny sehatra politika eto Mada- gasikara ankehitriny. Isan’ ny porofo nivaingana, ankoatra ny nandrombahany ny fandresena tamin’ny fifidianana kandidà, nandritra ny kaongresin’ ny antoko Tgv, ny fananan’ i Edgard Razafindravahy toerana sahady tao am-pon’ ireo mponina tany amin’ ny faritra maro notsidihany (Ambilobe, Antsiranana, Sakahara, Ilakaka, Mahanoro, Vatomandry, Tanambao-Manampotsy, Moramanga…).
Nisongadina indrindra ihany koa ny fisokafan’ity Pds-n’Antananarivo renivohitra ity tamin’ireo hery velona samihafa teto amin’ny firenena, tamin’izao ankatoky ny fifidianana ho Filoham-pirenena izao. Singanina ny fanohanana marobe nataon’ireo Ben’ny tanàna, hany olom-boafidy farany mbola amperinasa hatramin’ izao, taorian’ny fionganan’ ny fitondrana teo aloha.
« Tena tanjany io fisainana tsimialonjafy io. Tsapanay fa ao anatiny ilay fitiavana mandravona sy mampivondrona ny hery velona rehetra. Vitsy ny mpanao politika tahaka azy, amin’izao vanim-potoana diavin’ny firenena izao », hoy indray ny mpitarika fikambanana iray manohana ny filatsahan-kofidian-dRazafindravahy Edgard.
Iavahan’ity farany kosa ny fifandraisana matotra nananany tamin’ireo vahiny, indrindra tamin’ ny fikarohana mpiara-miasa ho fanatsarana ny tanànan’Antananarivo. Raha fehezina dia maha- feno ny fahamatorana politika, takiana amin’ny mpitondra ao anatin’ny firenena, i Edgard Razafindravahy. Tanora sahy handray andraikitra, hanamafy ny fitondrana rivo-baovao ho an’
source : aoraha.com